Tantara fito tato amin’ny Global Voices be mpamaky indrindra nandritra ny taona 2015 (teny anglisy) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Desambra 2015 4:34 GMT
Sary namboarina niparitaka vetivety ho firaisankina amin'ireo niharam-boina tamin'ny fanafhana tao Paris.
Tantara amin'ny teny anglisy mihoatra ny 2560, voadika in-10.000 amin'ny fiteny 40 samihafa no voazaran'ny fikambanana izay maro an'isa ny mpirotsaka an-tsitrapo.
Ny tantara fito be mpamaky indrindra amin'ny teny anglisy dia voajery mihoatra ny in-300.000 amin'ny salam-potoana dimy minitra eo ho eo. Tsy vitan'ny hoe nahasarika ny mpamaky indrindra izy ireo fa an-jatony ireo nizara, naneho hevitra, nankasitraka azy ireo tao amin'ny media sosialy sy ny haba-tranonkalanay.
1. Haiko tahaka ny araben'i Beirota ny araben'i Parisy [mg] avy amin'i Joey Ayoub
2. Mpisera Facebook Ejypsiana Iray Nigadra Telo Taona Noho Ny Nanaovany Sofin'i Mickey ho Sofin'ny Filoha, Abdel Fattah El-Sisi [mg] avy amin'i Amira Al Hussaini
Voalaza fa nosazian'ny fitsarana miaramila telo taona an-tranomaizina ny mpisera Facebook Ejypsiana iray noho ny fanaovana sarin'ny sofin'i Mickey Mouse teo amin'ny sofin'ny filoha Abdel Fattah El-Sisi sy namoaka izany tao amin'ny habaka tambajotra malaza. Voalaza fa voampanga amin'ilay mahazatra “fikasana hanongam-panjakana” ihany koa i Amr Nohan. Milaza ny fanehoan-kevitra an-tserasera fa miaramila zazavao i Nohan, ka izany no anton'ny nitsarana azy tamin'ny fitsarana miaramila. Ejypsiana maro no namerina nandefa ny sarin'i Sisi/Mickey Mouse, maneho ny hatezeran'izy ireo noho ny didim-pitsarana.
3. Napoitran'ny fanadihadiana ny tambajotra sosialy fa miasa feno ny milina mpandefa hafatra ao amin'ny Twitter avy amin'i Kremlin avy amin'i Lawrence Alexander
Sary mihorirana avy amin'ny tambajotra goavana mpanohana an'i Kremlin ao amin'ny Twitter. Sary avy amin'i Lawrence Alexander.
Tamin'ny alalan'ireo fitaovana opne-source no nanangonana sy nahatazanan'ny mpikaroka an'aterineto Lawrence Alexander kaonty Twitter pro-Kremlin manakaiky ny 20.500 isa, mampiseho ny hagoavan'ny fikasana hanodina ny fikirakiram-baovao ao amin'ny RuNet.
4. Polisy Serba Sy Zazalahy Siriana Velon-tsiky: Mampiseho Amin'i Eoropa Ny Nandraisana Am-pifaliana Ireo Mpitsoa-ponenana [mg] avy amin'i Danica Radisic
5. Ny ‘Hakanton'ny’ Tsy Fahazakàna Lahy Tia Lahy Na Vavy Tia Vavy, Rosiana [mg] avy amin'i Kevin Rothrock
Nandrahona ny hidaroka izay lahy tia lahy na vavy tia vavy izay hitany ity lehilahy ity. Sary avy amin'i Lena Klimova.
Ny 20 Aprily, namboraka rakitsary i Klimova, nitondra ny lohateny hoe “Olona Tsara Tarehy sy ny Zavatra Nolazain'izy Ireo Ahy“, izay nandefasany ho hitan'ny besinimaro ny sarin'ireo olona tsirairay amin'ny fiainan'izy ireo andavanandro, misy ireo hafatra mandrahona nalefan'izy ireo taminy tao amin'ny VKontakte, ilay tambajotra sosialy lehibe indrindra any Rosia.
6. Mety hahagaga anao hoe inona no mitondra fahafatesana be indrindra any amin'ny firenena andalam-pandrosoana avy amin'i Richard Fuller, Ensia
Toerana fandoroana fako ao Fada-Ngourma, faritanin'i Gourma, Burkina Faso. Sary avy amin'ny mpisera Flickr lepetitNicolas. CC-BY-NC-SA 2.0
Zavadehibe ny manamarika fa ankavitsiana no hamonoan'ny fandotoana olona mivantana na haingana. Fa na izany aza, miteraka tsy fahatomombanana eo amin'ny fo, aretin'ny havokavoka, homamiadana, tsy fahatomombanana eo amin'ny fiaina na fivalanana izany. Miasa ho toy ny mpamoha aretina ny fandotoana, mampiakatra ny tahan'ireo aretina ireo mihoatra noho ny mahazatra. Noho izay antony izay, dia heverin'ny OMS ho singa miteradoza ny fandotoana — mampanahy amin'ny fahasalaman'olombelona mitovy amin'ny fahatavezana, fifohana sigara, tsy fanjarian-tsakafo na tsy fahampian'ny fampiasam-batana. Saingy ny fandotoana no mpanjakan'ireo singa mety miteradoza rehetra ireo. Manerantany dia manakona ireo singa hafa rehetra mety mahafaty amin'ny toe-javamisy hafa ny loza aterany.
7. Mihoatra Lavitra Noho Ny Resaka Antontanisa Ireo Olona 147 Maty Nandritry Ny Fanafihana Tao Garissa [mg] avy amin'i Ndesanjo Macha
Tiako ny hahita ireo telo tapitrisa ao Nairobi hameno ny arabe hikiakiaka, sy hihira, ary hifamihina satria novonoina ny zanatsika. Tiako ny hitsahatra tsy hahatsapa fa hoe miaina loatra ho an'ny tena manokana isika. Tsy tiako ho re velively ny teny hoe fampandrosoana miainga avy amin'ny tena indray.